LED မီးခွက်နေဆဲလှုံ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်အရာကို type ကိုနေသော်လည်းသူတို့ဖြစ်ကြသည် .... အဲဒီမှာအပူဖြစ်ကြပြီးအပူမပေးဖြစ်သည့်အဖြူရောင်အအေးအလင်းရှိသည်သောသူတို့အားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဲဒါကိုလုပ်ရာမှကြည်လင်အမျိုးအစားအတွက်အားလုံးရဲ့ ... နှင့်မြေအောက်ခန်းထဲမှာ 220 Volts အကြောင်းကိုခြင်းဖြင့်လျှော့ချဖို့ 50 ထံမှဗို့ converter တစ်ခုအီလက်ထရောနစ်ယန္တရားဖြစ်ပါသည်, ပိုလျှံစွမ်းအင်အတွက်ရွေ့လျား အသီးသီးနွေးနဲ့အပူဟာ Transformer ၏ကွိုင်နှင့်စစ္နှင့်အိမ်ရာ ... ... ရူပဗေဒဆိုင်ရာဥပဒေများ။ ပါဝါစားသုံးမှုဆက်ဆက်နိမ့်ဝပ်တန်ပြန်လျော့နည်းမတ်စောက်သော, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့လက်ရှိဖြစ်ပါတယ် ...
ещ как греются, даже пайка плавится, а кто пишет "не греются",тот е в руках никогда не держал.
သငျသညျ, မှားငါ၏ချစ်ရတယ်ရှိသည်။ အဆိုပါ Light-emitting diode မျှရှိနိုင်ပါတယ် ဖော့စဖရပ်. Если же речь об "энергосберегающих", дневного света, так они греются, как и все прочие, в которых есть нити накаливания. Современные комбинированные светодиодно-люминофорные лампы работают при температурах чипа в районе 70-80 градусов. Где вы взяли, что они не греются?
အဲဒီမှာငွေစု, ဒါပေမယ့်သာသင်နဲ့ LED အားလုံးကိုမီးခွက်ကိုအစားထိုးလျှင်။
220 12 အတွက်ပါဝါ converter ကို၏ဦးထုပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပုံမှပိုမိုနီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ သို့မဟုတျ, 3.5 Volta ရဲ့အဲဒီမှာသူကများနှင့် treetsya ၌တည်၏။ နှင့်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကယ်တင်မီးခွက် LED ။ 1 eksperemetny နှင့်တိုင်းတာမယ့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကအပူဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီလိုကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်သည်: http://ledjournal.info/vopros-otvet/nagrevayutsya-li-svetodiodnye-lampy.html
LED မီးခွက်အပူ, ဒါပေမယ့်အက်ဒီဆင်တီထွင်မီးသီးထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အယ်လ်အီးဒီအဘို့မျက်နှာကြက်ပုံမှန်အပူချိန်အမည်ရတစ်သက်တာ 80 နာရီတွက်ချက်တဲ့အပူချိန်မှာ 85-30000 ကို C, စဉ်းစားသည်, အယ်လ်အီးဒီဟာနဲ့ LED 50-60S ထက်ပိုရဖို့မပါဘူးဆိုရင်ဒါဟာ 50000 နာရီအလုပ်လုပ်မည်, အပူမကြိုက်ဘူးဒါပေမယ့် 100-120S အထက်ပါအပူလျှင် ဒါဟာ operating နှင့် 1000 နာရီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲမီးခွက် socket E27 format ကိုမပေးသငျ့လျြောသောအအေးပေး razverneshsya နှင့်ခက်ခဲအတွက်, ဒါကြောင့်ပိတ်ထားသောမျက်နှာကျက်များတွင်အယ်လ်အီးဒီကိုမထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်း LED မီးခွက်၏အပူချိန်ကိုအာရုံစိုက်မူလ HC ထင်ပေမယ့်မပါမနေပါနဲ့။ အလွန်အပူနှင့်
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,192 စက္ကန့်ကျော် Generate ။